Vehivavy iray sahabo 45 taona no narahin’ity tovolahy ity avy ao aoriana ka noharoniny ny poketrany. Tsy nahazo anefa izy tamin’ny voalohany ka mbola nanaraka ihany ary niverenany noharonina indray ilay poketra raha sendra variana iny ilay tompony. Efa narahin’ny polisy manao ny operation PICK-POCKET teny an-toerana ny fihetsiny ka dia noraisim-potsiny izy. Nentina natao famotorana avy hatrany. Tamin’ny fotoana nisavàna azy dia nahitana fanalahidina « menotte » iray tany am-paosiny. Fantatra nandritra ny fanadihadiana hatrany fa efa mpameri-keloka izy satria dia efa nifonja ny taona 2019 noho ny resaka harom-paosy hatrany. Natolotra ny fampanoavana omaly alarobia ny tenany.